Holland oo isbitaalladeeda ku amartay dib u soo celinta Maasgarooyinka uu Shiinuhu u soo sameeyay
Mogadishu - 02:25:41
Sunday March 29, 2020 - 22:12:44 in Wararka by Super Admin
Dowladda The Netherlands ayaa ku amartay isbitaallada dalkaasi in ay dib u soo celiyaan illaa 600,000 oo maasgarooyinka wejiga lagu xirto ee la isaga difaaco Coronavirus, kuwaas oo ay sheegtay in uu u soo sameeyay shiinaha, isla markaana aysan celin karin feyrsuska COVID-19 oo uu ka gudbayo.
Wasiirka caafimaadka The Netherlands, Martin van Rijn oo u warramayay warbaahinta NOS ayaa sheegay ayaa sheegay in 21-kii bishan ay 1.3 milyan oo Maasgarooyinka wejiga lagu xirto ka soo sameysteen Shiinaha, hase yeeshee markii la baaray ay tijaabada ku fashilmeen.
600,000 oo ka mid ah Maasgarooyinkan ayaa loo qaybiyay shaqaalaha caafimaadka ee isbitaallada The Netherlands, waxaana dowladdu ay sheegtay in intii hartayna ay isticmaalkeeda joojiyeen, intii baxdayna wixii laga hayo dib loo soo celiyo.
Ma ahan waddankii ugu horreeyay ee Yurub ah ee ceeb ka sheega qalabka Shiinaha, waxaana khubarada Spain ay isbuucan sheegeen in qalabkii tijaabada deg degga ahaa ee COVID-19 lagu baaro ee uu Shiinuhu u soo farsameeyay aysan sheegeynin kiisas badan oo Positive ah.
Wargeyska El Pais ayaa qoray in daraasaad lagu sameeyay qalabka tijaabada COVID-19 ee Spain kala timid Shiinaha lagu ogaaday inay sheegayaan oo keliya 30% dadka qaba cudurka Coronavirus.
Waddanka kale ee Czech Republic ayaa iyaguna sheegay in qalabka lagu baaro Coronavirus ee ay shiinaha ka soo waarideen uusan u shaqeyneyn si sax ah.